lamaody maharitra: inona izany, toetra ary toro-hevitra | Green Renewable
Portillo Alemanina | 20/04/2022 12:00 | Tontolo_iainana
Matetika ny Ecolabels no misongadina rehefa miresaka lamaody maharitra, ireo resabe mifandray amin'ny famokarana any amin'ny orinasa lavitra, fa ezaka goavana hamahana sy bebe kokoa ny lamba voajanahary tsy misy vokatra misy poizina. Soa ihany fa voamarina eran-tany izany fahatsapana izany noho ny fanitarana ireo orinasa iraisam-pirenena sy ireo tanora mpandraharaha izay manome fiovana vaovao amin'ny foto-kevitry ny lamaody maharitra.
Noho izany antony izany dia hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny lamaody maharitra, ny toetrany sy ny tombony azony.
1 Lamaody maharitra
2 Fahazarana lamaody maharitra
2.1 aza mividy be loatra
2.2 Mampiasa vola amin'ny marika lamaody maharitra
2.3 Aza adino ny lamaody antitra sy ny akanjo taloha
2.4 Safidy ihany koa ny fanofana
2.5 Fadio ny ecoposturing
2.6 Fantaro mivantana ny fiantraikan'ny fitaovana sy ny lamba
2.7 Diniho hoe iza no manao ny akanjonao
2.8 Mitadiava marika manolo-tena amin'ny siansa
2.9 Mitadiava marika izay misy fiantraikany tsara amin'ny tontolo iainana
Mandalo ny fototry ny modely fandraharahana lamaody maharitra ny fiarovana ny harena voajanahary, ny fiantraika ara-tontolo iainana ambany amin'ny fitaovana ampiasaina (izay tsy maintsy azo ampidirina any aoriana any amin'ny rojo fanodinkodinana), ny fampihenana ny dian'ny karbaona sy ny fanajana ny tontolo ara-toekarena sy ny asa. ny toetry ny mpiasa voakasika manomboka amin’ny akora ka hatrany amin’ny fivarotana.
Ny indostrian'ny lamaody dia efa mirehareha mpamorona malaza, modely ary olo-malaza izay tompon'ny lamaody maharitra. Anisan'izany i Lucy Tammam, Stella McCartney, Frock Los Angeles, Amour Vert, Edun, Stewart+Brown, Shalom Harlow ary Summer Rayne Oakes.
Ny lamaody maharitra dia mahita tsikelikely ny toerany eo amin'ny indostria. ihany koa nisy fitomboana teo amin'ny fikarakarana fifaninanana, fety, kilasy, fandaharana fampidirana, fampahalalana matihanina amin'ny bilaogy sy ny maro hafa..
Ohatra, ny Portland Fashion Week, izay vao vita tany Etazonia, dia tsy nanana afa-tsy 100 isan-jato ny endrika ara-tontolo iainana. Ao amin'ny renivohitra Espaniola, notokanana tamin'ity taona ity ny The Circular Project Shop amin'ny fiezahana hahazo toerana amin'ny catwalk Madrid mifaninana amin'ny fanomezana akanjo maharitra. Notanterahina tany Madrid nandritra ny efa-taona ihany koa ny Andron'ny lamaody maharitra. Any Arzantina, Verde Textil dia manolotra vokatra tsy misy fiantraikany amin'ny tontolo iainana ary fanoloran-tena ara-tsosialy 100%, raha mivarotra an-tserasera.
Tranga iray tokony hojerena manokana ny momba ny marika Heavy Eco, orinasa lamaody voalohany natsangana tany am-ponja, mamokatra akanjo maharitra. Ho fanampin'ny asa famerenana amin'ny laoniny ireo mpanao heloka bevava estonianina maherin'ny 200 izay niara-niasa tamin'ny orinasa, ny 50%-n'ny tombom-barotra dia entina hanampiana ireo tsy manan-kialofana sy kamboty ao an-tanànan'i Tallinn.
Fahazarana lamaody maharitra
aza mividy be loatra
Io no fomba mahomby indrindra hifehezana ireo akanjo an-jatony lavitrisa vokarina maneran-tany isan-taona. Harriet Vocking, mpanolo-tsaina ho an'ny masoivohon'ny paikady maharitra Eco-Age, dia manoro hevitra ny hametraka fanontaniana telo alohan'ny hividianana akanjo: «Inona no tiantsika hovidiana ary nahoana? Inona no tena ilaintsika? Hampiasa izany amin'ny fotoana telopolo farafahakeliny izahay ”.
Mampiasa vola amin'ny marika lamaody maharitra
Ankehitriny rehefa nanapa-kevitra ny hividy amin'ny maso bebe kokoa izahay, inona no fomba tsara kokoa hanohanana ireo marika izay mazava fa manolo-tena ho maharitra. Ohatra, i Collina Strada, Chopova Lowena na Bode dia mampiasa akora voadio amin'ny famolavolana azy ireo. Manampy anao koa izy io hanivana ireo marika azo alaina mifototra amin'ny karazana akanjo ananany eny an-tsena, na akanjo fanatanjahan-tena maharitra toy ny Girlfriend Collective na Indigo Luna, akanjo milomano toa ny Stay Wild Swim na Natasha Tonic, na denim toy ny Outland Denim na Re/ Donate.
Aza adino ny lamaody antitra sy ny akanjo taloha
Miaraka amin'ny sehatra toa ny The RealReal, Vestiaire Collective na Depop, ny fiantsenana lamaody antitra sy akanjo fanindroany dia tsy mora kokoa. Eritrereto fa tsy hanome akanjo fanindroany fotsiny ianao, fa hanampy amin'ny fampihenana ny fiantraikan'ny tontolo iainana amin'ny akanjonao. Ny lamaody Vintage ihany koa dia manana tombony lehibe fa ny akanjony dia tena miavaka. Raha tsy izany, jereo ny endrik'i Rihanna na Bella Hadid, mpankafy be.
Safidy ihany koa ny fanofana
Rehefa misy fampakaram-bady na gala atypical (noho ny COVID, mazava ho azy), safidy azo ekena kokoa dia ny manofa akanjo. Ohatra, fianarana vao haingana tany UK Nanatsoaka hevitra fa mividy akanjo 50 tapitrisa isaky ny fahavaratra ny firenena ary indray mandeha ihany no manao izany. Ny fitaomana, sa tsy izany? Tsy misy isalasalana fa tsara kokoa ny miala amin'io fahazarana io, indrindra rehefa heverinao fa ny segondra mandalo dia mitovy amin'ny fandoroana fako amin'ny kamiao (na miafara amin'ny fanariam-pako).
Fadio ny ecoposturing
Nahatsapa ny marika fa lasa mahafantatra ny dian-tongotry ny tontolo iainana isika. Izany no mahatonga azy ireo matetika manandrana miroboka amin'ny vokatra misy filazana manjavozavo izay mety hamitaka na hanondro mivantana ny faharetan'ny fitafiny. Aza adala amin'ny fihetsika maitso ary aza mihoatra ny fitakiana "maharitra", "maitso", "tompon'andraikitra" na "manaiky" izay ho hitanao amin'ny etikety maro. Jereo raha marina izay lazainy.
Fantaro mivantana ny fiantraikan'ny fitaovana sy ny lamba
Rehefa miantsena maharitra dia zava-dehibe ny mahatakatra ny fiantraikan'ny fitaovana mamolavola ny akanjontsika. Raha fintinina, fitsipika ankapobeny tsara dia ny fisorohana ny fibre synthetic toy ny polyester (fitaovana hita ao amin'ny 55% amin'ny akanjo anaovanay) satria misy solika fôsily ny firafiny ary mila taona maro vao simba. Tokony hitandrina ihany koa ny lamba voajanahary. Ohatra, ny landihazo organika dia mampiasa rano kely kokoa (ary tsy misy pestisida) rehefa maniry noho ny landihazo mahazatra.
Ny tsara indrindra azontsika atao dia ny mitady akanjo misy mari-pankasitrahana maharitra mba hahazoana antoka fa ny lamba sy ny fitaovana ampiasainy dia manana fiantraikany voafetra amin'ny planeta: ohatra, ny Global Organic Textile Standard ho an'ny landihazo sy volon'ondry; Taratasy ho an'ny Vondrona Mpiasa hoditra ho an'ny hoditra na adhesive taratasy fanamarinana Filankevitry ny Fitantanana ny ala ho an'ny fibre fingotra.
Diniho hoe iza no manao ny akanjonao
Raha nanao na inona na inona ny areti-mifindra dia nanasongadina ny fahasahiranana isan'andro izay iainan'ny mpiasa maro amin'ny indostrian'ny lamba. Noho izany zava-dehibe ny hahazoana antoka fa mahazo karama mahavelona sy manana fepetra ara-dalàna izy ireo. Matokia ireo marika izay manambara vaovao momba ny politikan'ny karamany, ny fandraisana mpiasa ary ny fepetra iasana ao amin'ny orinasa, na aiza na aiza misy azy ireo.
Mitadiava marika manolo-tena amin'ny siansa
Ny fomba iray ahafantarana raha tena liana amin'ny fampihenana ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana ny orinasa iray dia ny fijerena raha manolo-tena amin'ny fenitra siantifika maharitra izy. Ireo marika izay manaraka ny sehatry ny hetsika fitarihana mifototra amin'ny siansa, anisan'izany i Burberry na Kering, ireo orinasa goavam-be ao ambadiky ny Gucci na Bottega Veneta, dia tsy maintsy manaraka ny Fifanarahana Paris momba ny fampihenana ny entona.
Mitadiava marika izay misy fiantraikany tsara amin'ny tontolo iainana
Ny orinasa maharitra toa an'i Mara Hoffman na Sheep Inc dia efa mieritreritra ny fomba ahafahan'izy ireo manana fiantraikany tsara amin'ny tontolo iainana ankoatra ny fampihenana ny fiantraikany. fambolena regenerative, tompon-daka amin'ny teknika fambolena toy ny famafazana mivantana na ny voly fonony, dia mahazo fanohanana ara-indostria bebe kokoa miaraka amin'ny tanjona mazava: hanatsarana ny kalitaon'ny tany sy hiarovana ny zavamananaina.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny lamaody maharitra sy ny maha-zava-dehibe azy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Lamaody maharitra
Inona no atao hoe valan-javaboary